Qalab weyn oo khadka tooska ah lagu sameeyo Pixel Art | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanka Pixel waa hab lagu sameeyo ama lagu saxo sawirada dhijitaalka ah pixel by pixel. Qaabkan farshaxanka garaafku wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee loo adeegsado in lagu sameeyo sawirro heer dhijitaal ah, oo illaa maanta la adeegsado iyo in dad badani u arkaan wax soo jiidasho leh.
Shabakada waxaa jira barnaamijyo badan oo ka shaqeeya noocan farshaxanada garaafka ah qodobkaan waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah aaladaha internetka si loo sameeyo farshaxanka pixel, markaa fiiro gaar ah u yeelo iyaga.
1 Qalabka ay tahay inaad sameysid Pixel Art
1.2 Wax ka beddelka Pixel
1.6 Samee farshaxan Pixel
Qalabka ay tahay inaad sameysid Pixel Art
Kuwaas oo aan ka xusi karno, tifaftiraha farshaxanka pixel-ka ugu badan ee lagu taliyay waa Aseprite, taas oo aan loo isticmaalin oo keliya tafatirka laakiin sidoo kale loo adeegsado horumarinta animations.
Waxay leedahay shaqooyin horumarsan si loo sameeyo animations, sida taageerada lakabyada, noocyo kala duwan oo dhameystiran oo laga kala dooran karo saameyn kala duwan si loo abuuro iftiin iyo hoos, iyo kuwa kale oo badan oo aan sidoo kale isticmaali karno. dhamaan sawirada waa la keydin karaa in aan ku sameynay qaab FNG ah ama qaab muuqaal ah oo GIF ah.
Waa in la ogaadaa in tifaftirahaani yahay il furan oo taageero badan leh, taas oo ah, waxaa loo isticmaali karaa Windows, MAC ama Linux.
Wax ka beddelka Pixel
Qalabkani waa hab lagu saxo farshaxanka pixel gaar ahaan kuwa la shaqee heerarka iyo animation game video.
Sawiradaas loo sameeyay heerarka si fudud ayaa loo dhoofin karaa waxaana lagu dari karaa koodhka ciyaarta fiidiyowga, tusaale ahaan si loo sameeyo jilitaanno tijaabo ah iyo animations-ku waxay sidoo kale ku jiraan qaab muuqaal ah oo GIF ah.
Wax ka beddelka Pixel wuxuu leeyahay a interface loogu talagalay si la mid ah barnaamijyada kale kuwaas oo loo isticmaalo tafatirka garaafka, oo leh liistada qalabka ku yaal bidixda, liiska qalabka midigta iyo daaqadaha kale, qaybta bilaashka ah ee xarunta ku hadhay ayaa loo isticmaalaa in lagu sawiro.
Qalabkani waa tifaftire farshaxan pixel in isticmaalaa il furan, taas oo la dhihi karo waxay la mid tahay dib ugu noqoshada wixii la soo dhaafay, ama muuqaal ahaan ama shuruudaha qalabka, taas oo ah, waxay ku shaqeysaa 16 MB oo RAM ah oo kombuyuutar ah, taas oo xusuusinaysa barnaamijyadan la sameeyay dhamaadka 90-meeyadii.
Iyadoo aan loo eegin muuqaalka dib u noqoshada, mtPaint wuxuu na siiyaa hawlo dhowr ah oo horumarsan, sida kan 2.000% qalab zoom taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan shaqooyin si raaxo leh u qabano, mid kale si aan u awoodno inaan kala furfurno ilaa 1.000 ficil oo horey loo sameeyay, wuxuu leeyahay taageero ilaa 100 lakab ah, noocyo kala duwan oo ka badan 80 gogol xaadh ah, noocyo kala duwan oo dhameystiran oo leh daraasiin shaqooyin ah , wax soo saar si aad uhesho shaashadda iyo aaladda lagu sameeyo GIF-yada firfircoon.
Qalab kale oo internetka ah oo lagu sameeyo farshaxanka pixel waa GraphicsGale. Si la mid ah codsigii hore, wuxuu leeyahay muuqaal fudud laakiin waxay u taagan tahay hab fudud oo lagu abuuri karo farshaxanka pixel, oo marka laga reebo tan waxaad kaloo sameyn kartaa animations. Waxay noo ogolaaneysaa inaan helno horudhac animation-ka la sameeyay, taageerida lakabyada iyo qalab kale oo aan kula shaqeyn karno pixels-ka.
Iyada oo leh interface xirfad leh, liiska qalab kala duwan oo laga helo bidixda, midabada hadda la isticmaalo, iyo shaqooyin kale oo badan, Piskel wuxuu leeyahay awood u leh inay ka shaqeeyaan Windows iyo MacMarka lagu daro xaqiiqda ah in sidoo kale loo isticmaali karo tifaftiraha khadka tooska ah ee shabakadda shabakadda iyo, sida codsiyada hore, waxay noo oggolaanaysaa inaan sameyno animations.
Samee farshaxan Pixel
Dadkaas doorbiday in aysan barnaamij kala soo dagin kombiyuutarkooda, waxaan kuu soo qaadaneynaa farshaxanka loo yaqaan 'Make pixel art', oo si toos ah uga shaqeeya biraawsarka webka.
Es hab aad u fudud oo lagula shaqeyn karo pixels, laakiin waxay leedahay aalado badan oo aasaasi ah oo aad u adeegsan karto inaad ku sawirto, ku rinjiso, masaxdo, ka dhex doorato dhowr midab inta u dhaxeysa, mugdi gelineysa una fududeyneysa sawirka aad rabto inaad naqshadeyso aakhirkana waxaad fursad u leedahay inaad la wadaagto dhammaan waxyaabaha aad abuurtay. khadka tooska ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Qalab weyn oo khadka tooska ah lagu sameeyo Pixel Art
Soosaarka dhijitaalka ah iyo teknoolojiyada cusub si loo naqshadeeyo alaabada